Robbinsdale Redesign, Wada Shaqeynta Adeegyada Qoyska ee Degmada, Abaal Marinta Gobolka | maqaalka
Bishii Abriil, oo ku beegan Bisha Ka Hortagga Xadgudubka Carruurta, Adeegyada FamilyWise, hay'adda hoggaamineysa gobolka ee ka hortagga xadgudubka carruurta, iyo guriga Prevent Child Abuse Minnesota, oo loo magacaabay Robbinsdale Redesign oo ah qof qaata abaalmarinta 2021 Pinwheel ee Abaalmarinta Ka Hortagga Carruurta.
Naqshadeynta ayaa u adeegta bulshada iyo qoysaska ka kooban Dugsiyada Aagga Robbinsdale. Wadashaqeyntu waxay isku dubarideysaa caqabadaha ka saarista qoysaska iyo carruurta si ay u helaan adeegyo dhiirrigeliya horumar caafimaad iyo bulsho adkeysi leh.
Sida laga soo xigtay FamilyWise Services, abaalmarinta waxaa lagu aqoonsadaa dadaallada cusub iyo iskaashiga ee looga hortagayo xadgudubka iyo dayaca carruurta. Dhamaan waa la sheegay, Redesign waa mid ka mid ah kaliya 18 urur, iskaashi ama barnaamijyo ka jira gobolka si loo helo abaalmarinta Pinwheel sanadkan.
Melodie Hanson, oo ah agaasimaha barnaamijka Redesign, ayaa sheegay in iskaashiga Robbinsdale si gaar ah loogu aqoonsaday shaqadiisa isku keenida aragtiyada anshax-marinta badan ee kor loogu qaadayo wacyiga khibradaha xun ee carruurnimada, iyo horumarinta qorshe adkaysi ee bulshada ay waddo. Sanadkii la soo dhaafay, ayay tiri, ku dhowaad 1,500 qof, oo ay ku jiraan hoggaanka degmada, shaqaalaha iyo xubnaha bulshada ayaa kaqeyb qaatay tababarka ku saabsan neerfaha, epigenetics, adkeysiga iyo khibradaha xun ee carruurnimada, iyo sagaal qof oo kale ayaa maraya shahaado si ay u noqdaan tababarayaal bulshada ah.
Hanson wuxuu yiri "Aqoonsigan wuxuu u socdaa dhamaan Dugsiyada Degmada Robbinsdale Area, kooxdooda horumarinta xirfadooda iyo xubnaha bulshada ee kaqeyb galaya tababarka ku saabsan neerobiology, ACEs iyo adkeysi," Heerkan kaqeybgalka ah wuxuu muujinayaa sida ay uga go'antahay degmada iyo bulshada inay u adkeystaan iskuulada dhexdooda. iyo bulshada. "
Waxbadan ka baro Robbinsdale Dib uhabeynta adoo booqanaya boggooda .